मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका उपत्यकाका २८ जना कुन ठाउँका हुन ? – Health Post Nepal
मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका उपत्यकाका २८ जना कुन ठाउँका हुन ?
२०७७ असार २३ गते १८:३०
भीम अस्पतालमा थप एक कारोना संक्रमितको मृत्यु
नेपालगन्जका युवाको माग- एक घर एक पिसिआर
उपत्यकामा थप ८७ सहित ३ सय ६० जनामा कोरोना संक्रमण
पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको उपत्यकामा मंगलबार २८ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या २६७ पुगेको छ ।नयाँ थपिएका २८ मध्ये १४ काठमाडौं, १० ललितपुर र ४ भक्तपुरका छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा स्रोतका अनुसार उपत्यकामा मंगलबार थपिएका संक्रमित २१ भन्दा बढी ठाउँका छन् । जसमध्ये काठमाडौमा चन्द्रागिरी, बुढानिलकण्ठ, धुम्वाराही, तारकेश्वर, गल्फुटार, कीर्तिपुर, धापासी, बसुन्धारा, नैकाप, टेकू, हाँडीगाउँ र कुलेश्वरका छन् ।
त्यसैगरी लतिलपुरको धोवीघाट, चापागाउँ, ग्वार्को, भैसेपार्टी, गोदावरी र थेचोका छन् । भक्तपुरमा ४ जना गठ्ठाघर र बालबोटका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्ममा उपत्यकामा २६७ संक्रमित मध्ये काठमाडौंम १ सय ७५, ललितपुरमा ४९ र भक्तपुरमा ४३ छन् ।
उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा बढेसँगै कोभिडका लागि भनेर छुट्याइएका अस्पताल बिरामीले भरिभराउ भएका छन् । कोभिड १९ को पहिलो चरणका संक्रमितलाई राख्न भनेर छुट्याइएको शुक्रराज सरुवारोग अस्पताल, बलम्बुस्थित शसस्त्र प्रहरीको अस्पताल, पाटन अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेजमा कोभिड १९का बिरामी भर्ना गरिएका छन् ।
पाटन अस्पतालमा ४५ बेडको कोभिड वार्ड, १५ बेडको आइसोलेसन र २१ वटा आइसियुमध्ये अधिकांश भरिएको छ ।
अस्पतालमा ५० बिरामीको उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माका अनुसार अहिले पनि बिरामी डिस्जार्र्ज हुनेर आउँने क्रम जारी रहेकोले रिक्त बेडको संख्या यकीन भन्न गाहे छ । ‘५ जनालाई आइसियू बेडमा राखिएको छ,’ उनले भने ।
कोरोना संक्रमणका लागि ३५ बेड छुट्याएको टेकू अस्पतालमा ३५ जना नै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
त्यसैगरी शसस्त्र प्रहरीको १२० बेडको अस्पतालमा ७० जना संक्रमित र २० जना शंकास्कास्पद र रिपोर्टको प्रतिक्षामा रहेकाहरु आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन् । तीबाहेक दुवाकोटस्थित केएमसी अस्पतालमा २० जना भर्ना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सक डा. माधव लम्सालले अहिलेसम्म आएका बिरामीको व्यवस्थापन गरिएपनि थप के गर्ने भन्ने तयारी हुँदैछ । ‘नेपालमा अहिलेसम्म अस्पताल चाहिने कोभिडका बिरामीले पाएनन् भन्न पर्ने अवस्था छैन्’ उनले भने, ‘अहिले भएका भरिँदै गएकोले अब अन्य अस्पताल पनि तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ,’ ।
काठमाडौमा पहिलोपटक माघ १० र दोस्रो चैत ४ मा नेपाल असंक्रमण पुष्टि भएको थियो । तर, बिचमा भारतबाट आउँनेहरुका कारण उपत्यकाबाहिर संक्रमणको चाप बढेपछि बाहिरबाट उपत्यकामा भित्रिनेको संख्या थपिएको थियो ।
यो सँगै उपत्यकामा समुदायमै संक्रमण फैलिएको आशंका समेत थप अनुसन्धान भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा बढेको संक्रमितको संख्याले विज्ञहरुले अबको हटस्पट उपत्यका बन्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।